April 10, 2019 - Dr.PhyoMaungMaung
1st Book ( ကျွန်တော်ရေးသော ကျန်းမာရေးစာစုများ )
ကိုလက်စထရော( Cholesterol ) မကောင်းဘူး မစားနဲ့လို့ ပြောခဲ့တာ ၁၉၅၀ အစောပိုင်းကာလတွေမှာပါ။ဒါပေမယ့် ကိုလက်စထရော မှာ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။သည်းခြေအရည် ထုတ်လုပ်ဖို့ ကိုလက်စထရောလိုပါတယ်။ ကိုလက်စထရောမလုံလောက်လျှင်
Gluten ( ဂလူတန် ) စားတာ မကောင်းဘူးလို့ စပြောခဲ့တာ ဒေါက်တာ William Davis နှင့် ဒေါက်တာ David Perlmutter ပါ။ဂလူတန်ထက်ဆိုးတာက WGA လို့အတိုပြောကြတဲ့ wheat germ agglutinin အပင်ထွက်ပရိုတိန်း တစ်မျိုးပါ။ပေါင်မုန့်ကြမ်းမှာ
Pressure cooker ဖြင့်ချက်ပြုတ်ခြင်း
သဘာဝကြီးက သိပ်အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ် မစားသင့်သေးတဲ့ အသီးဟာ အရောင်အားဖြင့် အပင်စားတဲ့ အကောင်တွေကို မတွေ့အောင်လုပ်ထားပါတယ်။အသီးတစ်ခုကို မစားသင့်သေးဘူးဆို အရောင်ကလည်းစိမ်းတယ်။အနံကလည်း မမွှေးဘူး။စားလိုက်လျှင်လည်း
အဝလွန်ခြင်း၊ အဟာရမပြည့်ခြင်း၊ ဟိုမုန်းတွေမူမမှန်ခြင်း နှင့် နာတာရှည် ရောင်ရမ်းခြင်းတွေက ကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။သတိမထားမိပေမည့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော
ဇော်ဇော်ဦး on မိခင်များဆီသို့ -၂၀
U Mya Soe on How to Pick the Best Probiotic Supplements
မအိ မအိ on Dr. Axe ပြောပြတဲ့ အူလမ်းကြောင်း အမျိုးမျိုး
phyo maung on Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)
min thu on Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)
2nd Book ( ကျန်းမာရေးအတွက် အဟာရလှေကားထစ်များ )My Health diary
2nd Book ( ကျန်းမာရေးအတွက် အဟာရလှေကားထစ်များ )
3rd book ( သိုင်းရွိုက်လိပ်ပြာ )
4th book ( မိဘများဆီသို့ )
ဂျင်း အသုံးဝင်ပုံ ၁၁ ချက်
Copyright © 2018 Dr Phyo Maung Maung. All rights reserved. Powered by HlaingTinHtun